7 Iche omenala Omenala maka ndị njem | Akụkọ Njem
Maria | | General, njem
Foto | Nkeji 20
Ga njem bụ ahụmịhe bara ụba. Ọ na-emeghe uche ma nye ohere ịmara ụzọ ndụ ndị ọzọ. Mba ọ bụla nwere ọdịbendị na omenala ha nke dabere na ya, nke ọtụtụ ndị njem nwere ike iju anya na ọbụnadị ihe ịtụnanya ma e jiri ya tụnyere nke ha.
Mgbe ị na-ejegharị na ụwa, ọ dịghị mgbe ọ na-ewute ịnakọta ọtụtụ ozi gbasara mba anyị na-aga ileta. Ọbụghị naanị na ebe mmasị ma ọ bụ ụzọ njem kamakwa n'usoro ọdịnala ya. Yabụ, na post na-esonụ anyị ga-enyocha ụfọdụ omenala obodo nke nwere ike iju n'anya ndị njem nleta.
1 Roundbọchị Groundhog na Pennsylvania
2 Enweghị okooko osisi nye ndị ọbịa na China
3 Gbasapụ, omume ọma
4 Usoro phallic nke Japan
5 Mkpịsị aka Mgbatị na Germany
6 Nkịta Nkiri Ememme na China
7 UK si Rolling cheese oriri na ọ festivalụ UKụ
Roundbọchị Groundhog na Pennsylvania
Kwa February 2, a na-enwe amụma ihu igwe dị egwu na Pennsylvania. A maara dị ka 'ụbọchị Groundhog', a haziri emume a kemgbe afọ 1841 (afọ nke edere ederede izizi) mgbe ndị nhazi ahụ kpọpụtara Phil, onye a ma ama n'ala, si n'olulu ya buru amụma mbata nke oge opupu ihe ubi.
Omenala na-ekwu na ọ bụrụ na ala anaghị ahụ onyinyo ya wee hapụ olulu ahụ, n'oge na-adịghị anya oyi ga-agwụ. Ọ bụrụ na, n’aka nke ọzọ, maka na ọ bụ ụbọchị anwụ na-acha, ala na-ahụ onyinyo ya wee laghachi n’olulu ahụ, ọ pụtara na oge oyi ga-anọ izu isii ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọdịnala a dị egwu na-eme n'ọtụtụ ndị bi na United States na Canada, marmot kachasị ewu ewu bụ Phil nke Punxsutawney, Pennsylvania.
Enweghị okooko osisi nye ndị ọbịa na China
Foto | Rinfocus
Na-enwe mmasị inye ma nye gị okooko osisi? Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị gaa China ị kwesịrị ịma na ọ dị njọ inye onye nwe ụlọ anyị gara leta okooko osisi. A na-eche na ndị ọbịa, n'ụzọ dị otú a, na-egosi na ụlọ ahụ adịchaghị mma ma yabụ ndị ọbịa ahụ chọrọ ihe ha ga-eji chọọ ya mma.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na oge ahụ ebilie iji nye nwanyị otu ùkwù okooko osisi, ọ ga-akachasị mma ma ọ bụrụ na ha abụghị ihe aka n'ihi na ha na-adịru ebighi ebi. N'aka nke ọzọ, ndị nke sitere n'okike akpọnwụ ngwa ngwa.
Gbasapụ, omume ọma
Na omenaala anyi, aguru igbu mmadu n’ihu ọha dika ihe nzuzu. Onweghi onye choro ihu onye ozo na-aputa nnukwu onu ya. Agbanyeghị, na agbụrụ Massai (Kenya na Tanzania) ọ bụ ọdịnala iji ihu ọma ekele ndị enyi na ndị enyi. Ha na-agwakarị ụmụ amụrụ ọhụrụ ọnụ mmiri iji chebe ha pụọ ​​n’aka ndị mmụọ ọjọọ.
Usoro phallic nke Japan
Foto | GQ India
Ọtụtụ ndị njem ga-anọrịrị mgbe ha na-elegharị anya na Kawasaki phallic procession. Ọ bụ emume ọdịnala nke ndị Japan na-eme iji jụọ chi maka ọmụmụ, nchedo ọrịa na-ebute site na mmekọahụ ma ọ bụ maka nwatakịrị nọ n'ụzọ ka amụọ ya nke ọma.
Isi etiti nke ememme ahụ bụ nnukwu ihe oyiyi na ọdịdị nke amụ ha na-apụ n'usoro nke ndị nnọchi anya ndị ọzọ buru ibu na obere. Iji mee ememme ụbọchị a, ndị mmadụ na-eri ihe ụtọ na ụdị amụ dị iche iche n'okporo ámá, ụfọdụ ndị Japan mere okpu ndị yiri akwa spam, a na-erekwa T-shirts n'ụlọ nsọ, yana kandụl na ihe ncheta ndị ọzọ nwere ụdị phallic. Ihe obula nwere ike inwe nkasi obi a gha ano.
Mkpịsị aka Mgbatị na Germany
Foto | Beaumont Enterprise
Kwa afọ a na-eme International Alpine Championship na Ohlstadt, Upper Bavaria, ka ịhọrọ akara aka kachasị mma na mba ahụ. Ọ nwere ike ịdị ka ihe ọchị mana nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ndị Ọstrịa na ndị Bavaria ọ bụ ihe gbasara ugwu.
Ndị na-esonye na asọmpi ndị a na-akwado nke ọma iji merie obere oge. Fọdụ na-eji aka ha apịa bọọlụ tenis iji nweta ike ebe ndị ọzọ na-eji otu mkpịsị aka ebuli ọtụtụ pound.
Nkịta Nkiri Ememme na China
Foto | Nkịta obi ụtọ
Kwa afọ na Yulin, China, a na-eme ọbịbịa nke solstice a na-eme ememme nkịta. Ọ bụ ezie na ụjọ na-atụ ọtụtụ mmadụ echiche iri anụ nkịta, nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala a nwere mkpọrọgwụ miri emi na mpaghara ahụ ma na-aga n'ihu kemgbe ọtụtụ narị afọ.
O yiri ka iri anụ nkịta n'oge ọnwa ọkọchị na-eweta ahụike dị mma, na-eme ka enwekwu mmekọahụ, ma na-echebe megide ọrịa. Ma ọ bụrụ na ọ na-esonyere mmanya, ọ ka mma.
Anụ anụ ahụ nwere ekele bụ nke ịgafe San Bernardo na ụdị anụ ọhịa ebe ọ bụ na ha na-emepụta mkpofu bara ụba ma na-eto ngwa ngwa. Nkịta ndị e gburu egbu nọ n’agbata ọnwa isii na ọnwa iri abụọ na abụọ mgbe anụ ha na-adịkarị nro maka oriri.
Agbanyeghị na ndị nchekwa gburugburu gbalịrị ime ka ndị ọchịchị Yulin machibido ire anụ nkịta n'ahịa na ụlọ nri, na omume ọ ka na-eri.
UK si Rolling cheese oriri na ọ festivalụ UKụ
Ememme a bụ ihe ama ama nke na a na-eme ya n’obodo dị iche iche na UK. Agbanyeghị, onye ama ama niile bụ nke dị na mpaghara Gloucestershire: Cooper's Hill Rolling Cheese Festival.
Ihe edere edere edere banyere ihe omume a sitere na etiti narị afọ nke iri na itoolu, ọ bụ ezie na enweghi nkwekọrịta banyere mmalite ya. Omenala nke ịtụda chiiz n’ugwu ma na-achụ ya ijide ya kwenyere na ọ bụ akụkụ nke usoro mmemme a na-eme n’oge ọkọchị iji mee ọbịbịa oge a.
Inweta chiiz na ngagharị ọ gaghị ekwe omume dịka ọ ga - erute ọsọ nke 100 km / h. Ihe niile ndị sonyere nwere ike ime bụ ịrịda ugwu ahụ wee gbalịa iru akara ngwụcha n'ọnọdụ kachasị mma iji jide ya na ohere izizi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 7 Iche omenala Omenala maka ndị njem
Ebee ka ị ga-a drinkụ vermouth na Madrid dị ka ezigbo nwamba?